Nepal Dayari | आज नाग पंचमी, यसरी गर्नुहोस् नाग देवताको पूजा, हट्नेछ सारा दुख-कष्ट !
आज नाग पंचमी, यसरी गर्नुहोस् नाग देवताको पूजा, हट्नेछ सारा दुख-कष्ट !
साउन २९, २०७८ शुक्रबार ७४४ पटक हेरिएको
श्रावण महिनाको शुक्लपक्षको पंचमी तिथिलाई नाग पंचमीको रूपमा मनाइन्छ। हिन्दू धर्ममा नाग पञ्चमीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मान्यता अनुसार यस दिन १२ प्रकारका सर्पको पूजा गरिन्छ र दुध पनि चढाइन्छ। भगवान शिवलाई सर्प निकै प्रिय छन्। त्यसैले, उनको प्रिय महिना साउनमा नाग पंचमी मनाइन्छ, जसको कारण भोले बाबा प्रशन्न हुन्छन् र भक्तलाई आशिर्वाद दिन्छन्। यो वर्ष साउन २९ गते शुक्रबार अर्थात भोलि शुक्लपक्षको पाँचौं दिनमा नाग पंचमी परेको छ।
नाग पंचमीको पौराणिक कथा
भविष्य पुराणका अनुसार साउन महिना पंचमी देवी नागलाई समर्पित छ, त्यसैले यसलाई नागपंचमी भनिन्छ। पौराणिक कथा अनुसार, सावन महिनाको शुक्ल पक्ष पंचमीमा वृन्दावनमा भगवान श्रीकृष्णले सर्पलाई पराजित गरेर मान्छेको ज्यान बचाएका थिए। भगवान श्रीकृष्णले सर्पको टुप्पोमा नाचे, जसपछि उनी नाथैया कहलाइए। अर्को कथा पनि छ जस अनुसार यस दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जीले आफ्नो कृपाले शेषनागको श्रृंगार गरेका थिए। पृथ्वीको वजन धारण गरेपछि मानिसले नाग देवताको पूजा गर्न सुरु गरेका हुन्। त्यसबेलादेखि यो परम्परा चल्दै आएको छ।
नाग पंचमी पूजा र सर्पदोषबाट मुक्ति
मान्यता अनुसार साउन शुक्लपक्ष नाग पंचमीको दिन व्रत पनि राखिन्छ। उपवासको बारेमा गरुण पुराणमा लेखिएको छ कि उपवास बस्ने व्यक्तिले माटो वा पीठोको सर्प बनाएर फरक-फरक रंगले सजाउनु पर्छ। सजावट पछि, फूल, खीर, दूध, बत्तीहरू आदिका साथ पूजा गर्नुहोस्, किनभने नाग देवतालाई पंचम तिथिको स्वामी मानिन्छ। पूजा पछि भुटेको चना र जौ प्रसादको रूपमा वितरण गर्नुहोस्। जसको कुण्डलीमा कालसर्प दोष छ उक्त व्यक्तिले यस दिन विधि-विधानका साथ नाग देवताको पूजा गर्नुपर्छ। यस दिनमा पूजा गर्दा कुण्डलीको यस्तो दोष समाप्त हुन्छ। बिगुल न्युज बाट